Best 24 Skull Tattoos Ideal ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Ny tsara indrindra 24 Skull Tattoos hevitra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ny fampiasana Skateboard tattoos dia afaka manompo tanjona maromaro. Ny dikany dia mety ho faty sy fahafatesana. Mila manao fikarohana ianao alohan'ny hahafahanao mampiasa tato-tsonga.
Tato ho an'ny skull
Ny tato ho ato dia tsy mitovy amin'ny toerana iray. Misy karazana karandoha samihafa ary manana ny heviny koa izy ireo. Ny fiheverana fa ny karandoha dia midika ho ny fahafatesan'ny olona marobe dia mety tsy ho marina, indrindra rehefa misintona amin'ny saka lehibe. Ny karandohany dia afaka misintona amin'ny fomba maro ary miafara amin'ny dikany lehibe izay tianao. Ny tato ho an'ny karandoha dia mety ho fampahatsiahivana ny olona iray maty ary koa tokony hoe tokony hiaina tanteraka ity fiainana ity.
Ny endriky ny karandoha ihany koa dia manana ny dikany tahaka ny saka populaire #skull izay tato ho ato izay antsoina hoe tato ho an'ny karandoha Meksikana na ny tatoazy. Raiso ohatra ny Meksikana tia ny andron'ny tato amin'ny maty noho ny anjara andraikiny.
Ny vehivavy mampiasa ireo karazana tatoazy ireo dia matetika manao izany amin'ny lokony lehibe mba hanomezana azy bebe kokoa. Misy ireo olona izay mampifangaro ny karandoha amin'ny hazo fihantsonana indrindra indrindra ny piraty, ny tatoazy dia manana dikany maro araka ny filazan'ny olona ilay sary.
Matetika ny vehivavy no mampiasa loko amin'ny fanovàna ny fomba fijerin'ny olona ny #tattoo ary koa ny dikany dia tena malaky be.
1. Ny tontolon'ny hoditra hoditra amin'ny totozy ho an'ny zazalahy dia mamorona hevitra ho an'ny ankizilahy eo amin'ny tongotra
Matetika ny hoditra dia heverina ho zava-masina na zava-mahadomelina, fa rehefa tonga amin'ny tatoazy dia lasa tsy mitovy amin'ny eritreritsika ny karandoha. Ny karandoha amin'ny endriny sasany dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny zavatra.
2. Ao an-tànana tato ho ato ny tonta tato ho an'ny zazalahy
Ireto ny sasany amin'ireo fanontaniana mila alainao alohan'ny hahazoanao tatoazy ho anao.
3. Tato anaty kalokalo matevina amin'ny hevitra lavorary ho an'ny ankizilahy
Ianao no mpanamboatra ny tatoazy. Rehefa nahazo tatoazy izay mampitony ny eritreritrao ianao na mamaly ny fanontanianao amin'ny fisoloanao hevitra iray manokana, dia andraikinao ny hahazo mpanakanto
4. Tato an-tànan-tatoazy mamolavola hevitra ho an'ny lehilahy
Indray andro dia ireo lehilahy ireo ihany no nanala ny tatoazy tamin'ny vatany.
5. Ny totozy karazana tato ho an'ny skull dia manamboatra hevitra ho an'ny lehilahy
Voaroaka ny andro izay matahotra ny olona amin'ny zavatra toy izany. Miaraka amin'ny tato ho lasa endrika noforomporonina, hitantsika fa olona maro no manaiky tato ho ato tahaka izao.
6. Creative tattoo tatoazy mamolavola ny vehivavy
Miaraka amin'ny isan'ireo mpanakanto mahay an-tserasera, ny fitadiavana ny mpanakanto dia mety ho traikefa mampiahiahy izay ny antony hanoroanantsika anao hikaroka voalohany alohan'ny handikana azy.
7. Leaf sy skull tattoo mamorona hevitra ho an'ny tanana
Ny fomba ataon'ny olona mamorona zavatra samihafa amin'ny tatoazy toy izany dia mahatonga azy bebe kokoa. Inona ny hevitrao?
8. Ny tato ho an'ny skull dia mamorona hevitra miaraka amin'ny voninkazo manga amin'ny lehilahy
Niova ny tantara androany fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia afaka mampiasa ity tatoazy ity fa tsy mahatsiaro tena.
9. Tombo-kavina tombo-kavina tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy
Ity tatoazy #design ity dia mety ho hitanao manokana. Na izany aza, raha tsy manana mpanakanto ianao hisolo tena tanteraka amin'ny vatanao dia mety ho loza izany.
10. Musical rock skull tattoo ink toning ideas for men thigh
Maro ny olona nandany ny fotoanany sy ny volany izay niezaka ny hahazo tatoazy tonga lafatra raha vao vita ny asa atao tatoazy.
11. Toro-tehaka ho an'ny antsasa-manilan'ny hoditra tattoo fanadinana hevitra ho an'ny ankizilahy
Ny tranga ratsy kokoa dia mitranga foana rehefa misy olona ratsy endrika tatoazy. Ny traikefa dia zavatra tsy tokony ho eritreretina mihitsy.
12. Ankavia miankina amin'ny vatana amin'ny tatoazy matevina
Ny tatoazy toy ity dia azo alaina amin'ny endriky ny vatany. Rehefa manana izany eo amin'ny faritry ny vatanao ianao, dia tsy mitsahatra mijery tsara izy. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahazo mpanakanto mahay izay hanampy anao amin'ny endrika mahatalanjona
13. Tapa-doko mofomamy mirefy tato ho an'ny totozy ho an'ny lehilahy
Ny dikan'ny karazana skull iray dia zavatra tena mila mahatakatra anao alohan'ny hampiasanao azy. Azonao atao ny mamolavola ny nofin-tsarinao araka ny fomba tianao hahatongavan'izy ireo. loharanon-tsary
14. Biceps skull tattoo ink ho an'ny ankizilahy
Na izany aza, midika zavatra be dia be izany raha tsy fantatrao. Azo ampiasaina hilazana hery, hery ary fiarovana izany. Ho an'ireo izay tsy maintsy manana traikefa akaiky ny fahafatesana na ny fahafatesana dia matetika izy ireo no mampiasa izany mba handresy ny phobias. loharanon-tsary
15. Tifitra amin'ny antsasaky ny fitaovana famolavolana karazana tato ho an'ny tato ho an'ny zazalahy
Matetika ny olona sasany no mampiasa izany mba hampisehoana ny fiainany taloha. Afaka maneho ny toetra ratsy mihitsy aza izy io. loharanon-tsary
16. Ny hoditra tato ho an'ny hoditra hoditra mamorona hevitra ho an'ny tanana
Indraindray, ampiasaina amin'ny fampitandremana ny olona ny karazana tatoazy ho an'ny olona ary koa mariky ny fandresena. Afaka manintona ny endrika sy ny endriny samihafa izany. Afaka manamboatra azy kokoa ny vehivavy raha tianao. loharanon-tsary
17. Tifitra amin'ny antsasaky ny tadidy hoditra hoditra tato ho an'ny lehilahy
Ho an'ireo vehivavy na ireo izay maniry zavatra hafakely, ny karandohany dia mety lehibe. Raha mieritreritra ianao fa manana karandohany kely, dia mety tsy maintsy mandeha an-tsokosoko ianao. Izany dia zavatra azonao atao eo amin'ny ankihibenao, angoloka na eny amin'ny sandriny. loharanon-tsary
18. Totozy maingoka malefaka tato ho an'ny vehivavy
Ny tatoazy ho an'ny karandoha dia mety tsara tarehy amin'ny loko mba hahatonga azy ho matanjaka. Misy faritra samihafa ao amin'ny vatana izay ahafahan'ny tetikasa fanamboarana lamaody lehibe. Afaka mahazo sahy kely ianao raha mamela azy ho lehibe eo amin'ny lamosinao. loharanon-tsary
19. Teboka feno tato ho an'ny tato ho an'ny tato ho an'ny ankizilahy
Ny fampiasana karandoha dia nanjary nalaza be, ka na dia ny vehivavy aza dia mampiasa ny mampahatahotra. Ireo hafatra izay mandalo ireo karandoha ireo dia miankina amin'ny olona izay nanoratra ny endriky ny vatany. loharanon-tsary
20. Nitsangana tamin'ny mofomamy tato ho an'ny zazavavy ny mena
Na izany aza, indraindray, tsy midika firy amin'ny mpampiasa izany afa-tsy loko misy loko amin'ny vatany. Azonao atao ny mamorona tetikasa hafa amin'ny tato-tsatro-boalavoo mba hahatonga azy ho tsy manam-paharoa sy hanome azy hafatra hafa. loharanon-tsary
21. Ny tato ho an'ny hoditra hoditra dia mamolavola hevitra ho an'ny sorok'ilay lehilahy
Ny hakanton'ireo tatoazy ho an'ny karandoha dia ny tokana izay nikambana tamin'izy ireo. loharanon-tsary
22. Kanto sy mahavariana tato ho an'ny karazam-bolo amin'ny ankizivavikely
Ny ampahany amin'ny vatana izay ilainao ampiasaina dia tokony hodinihina tanteraka satria izany dia hamaritra ny halehibe na ny tatoahanao ny ho toy izany. loharanon-tsary
23. Ao ambadiky ny totozy tato ho an'ny tato ho an'ny tato ho an'ny zazavavy
Azonao atao aza ny mamadika ireny zavaboary ireny ho toy ny sexy rehefa manintona azy ireo ianao. Azonao atao ny manatsara ny sarinao amin'ny alàlan'ny fanaovana tato ho an'ny karandoha amin'ny vatanao. loharanon-tsary
24. Ankizy mahafinaritra, karazana tato ho an'ny lehilahy
Rehefa manana mpilalao tatoazy tsara ianao, ny antsasaky ny asanao dia rehefa vita ny tatoazy ary tsara kokoa, vita ny asa. loharanon-tsary
tattoo eyemozika tatoazytattoostattoos sleeveAnkle Tattoostattoo watercolortattoos ho an'ny lehilahycompass tattootattoos rahavavytattoos mahafatifatyrip tattooscat tattoosmoon tattooslion tattoostattoos footmehndi designdiamondra tattootattoos voronatattooshenna tattootattoos crosstattoo ideastatoazy voninkazofitiavana tatoazyarrow tattoonamana tattoos tsara indrindratattoos armeagle tattoostattoos backanjely tattoosraozy tatoazyscorpion tattooloto voninkazotatoazy fokoTattoo Feathertatoazy ho an'ny zazavavytattoo infinitytanana tatoazytratra tatoazytattoo octopusmasoandro tatoazytattoo cherry blossomHeart Tattooskoi fish tattooNy zodiaka dia mampiseho tatoazytatoazy loloTatoazy ara-jeometrikatato ho an'ny vatofantsikatattoos mpivadyelefanta tatoazy